Dagaal u dhaxeeya Alshabaab iyo Abuumansuur Rooboow oo mar kale ka qarxay Tuulo u dhow Xudur. – Hornafrik Media Network
Dagaal culus oo u dhaxeeya Maleeshiyaad kala taabacsan Kooxda Alshabaab iyo Hogaamiyahoodii hore, Mukhtaar Rooboow Abuu Mansuur ayaa mar kale dib uga qarxay Deegaanka Abal ee u dhow Degmadda Xudur oo Xarun u ah Gobalka Bakool.
Dagaalkan ayaa lagu soo waramayaa inuu ka xoog badan yahay kii dhacay Arbacadii oo ay markan si aad ah u soo qalab urursadeen Maleeshiyadda Alshabaab oo Dagaalkii hore looga adkaatay. Waxaana Warar ay heshay Hornafrik ay sheegayaan in dib laga gacan sareeyo Maleeshiyadda taabacsan Abuumansuur oo wada hadal kula jira Dawladda Somalia.
Maleeshiyadda Alshabaab ayaa lagu soo waramayaa inay wataan Gawaari badan oo Dagaal, Gantaaladda Garabka laga rido, iyo Hub kala duwan, Waxay sidoo kale ku soo biiriyeen Dagaalka Maleeshiyaadka Ajnabiga ah ee ka bar bar dagaalama, kuwaasoo u muuqda inay sii cusleeyeen Dagaalka.
Maleeshiyadda taabacsan Abuumansuur oo Shalay helay Saanad Milatari ayaa wali ku jira Iska caabin, waxayse lumiyeen Saldhigoodii ugu waynaa ee uu daganaa Abuumansuur oo hadda ku jira Gacanta Kooxda Alshabaab.
Abaabul ayaa ka socda Goboladda Bay iyo Bakool la doonayo in loogu gurmado Muqtaar Rooboow Abuumansuur, iyadoona Gurmadka ugu horeeya uu gaari karo Subaxdii, taasoo aan la sii saadaalin karin sida uu xaalku noqon karo illaa iyo waabarigii.
Arbacaddii ayeey isla Deegaankan Abal ku dagaalameen Maleeshiyadda Alshabaab iyo Taageerayaasha Abuumansuur, Waxaana Dagaalkaasi ku dhintay illaa iyo 27 Maleeshiyaad ah oo labada dhinac ah, iyadoo Dagaalkaasna lagu jabiyay Maleeshiyadda Kooxda Alshabaab.